Shiinaha Spot light warshad PL021 iyo soosaarayaal | Eurborn
Qalabka marinka 316 ee birta ah ee birta ah ee birta ah ee birta ah oo dhammaystiran oo leh xirmo CREE LED ah. Muraayad la sawiray, qalab lagu qiimeeyay IP68 oo u oggolaanaysa in lagu quusiyo biyaha taas oo diidaysa arrimaha guud ee ka dhasha la'aanta qashin-qubka. 12/45 Kala-goynta darajooyinka farsamada. isha waxay hubineysaa Ilaalin adag oo ka dhan ah soo gelinta biyaha. wax soosaarku wuxuu qabtaa kulan qabow dhammaan shuruudaha heerkulka Taabashada. Iftiinka barta mini-ga ee dhulka lagu rakibay oo leh mid hogaaminaya awoodduna waa 1W. Codsiga alaabtu waa mid jilicsan, waxaa jira noocyo kala duwan oo heerkul midab u leh macaamiisha inay doortaan. Waxay ku habboon tahay in lagu rakibo beeraha, deyrarka, jardiinooyinka, barkadaha gaarka loo leeyahay, villa, derbiyada gudaha iyo bannaanka. Waxaa loo isticmaali karaa sidii codsi loogu talagalay nalka barta biyuhu ka soo galaan, nalalka biyo-dhaca, biraha birta ah ee birta biraha ah
Indhaha S12 ° / F45 °
Ansixinta CE RoHS, IP
Heerkulka heerkulka -2O ° C ~ + 45 ° C
Celceliska nolosha 50,000Hrs
PL021 NALKA DHARKA
PL021 CREE CW, WW, NW, Casaan, Cagaar, Buluug, Amber 12/45 Joogto ah 350mA Taxanaha 3M 2X0.75mm² Xarig 1W 100LM 60X60X78 N / A
PL021D CREE CW, WW, NW, Casaan Casaan, Buluug, Amber 12/45 Danab joogto ah 24VDC Is barbar dhig 3M 2X0.75mm² Xarig 1.3W 100LM 60X60X78 N / A
PL021RGB Edison RGB 45 Joogto ah 350mA Taxanaha 2x3M 4X0.5mm² Xarig 3W N / A 60X60X78 N / A
PL021DMX-RGB Edison RGB 45 Danab joogto ah 24VDC DMX maamusha Is barbar dhig 1.1M 4X0.5mm² Xarig 3.5W N / A 60X60X78 N / A
* IES Taageerada xogta.
Hore: Iftiinka barta 'PL023'
Laydhka gidaarka ML104